Umhla My Pet » 3 Izinto Ofanele Uzazi Ukuba ufuna ukwenza
ukubuyekezwa: Oct. 20 2020 | 2 min ukufunda
abafazi abaninzi baya mazingqinelane esithi amadoda namhlanje ukubonisa uloyiko olomeleleyo ukuzibophelela xa kuziwa kubudlelwane. Gqirha liya kukuxelela utyekelo elifanayo sele kukuqaphela wesini esahlukileyo kwaye lichaze nonke inemvelaphi olu loyiko xa – iinkxalabo ukuba inkululeko yabo, zabo zabucala kunye nakwinkululeko. Ingaba phantsi bacinge ukuba iqabane lakho ukuba ukulungele ukwenza? Kufuneka wazi ukuba isitshixo entliziyweni yomntu wakho nokuba izenzo zakho kuba nempembelelo enkulu phezu isigqibo yakhe behlala ubudlelwane okanye ayise kwi-kwinqanaba elilandelayo. Ukuzibophelela asinto umntu unako ochasiweyo zibe, uyazi ukuba sele. Ukuba uchole ixesha ekunene, bonke onokuzenza xa ufuna ukwenza ukuba abakhuphe ukuba imvakalelo ezikhethekileyo eziya kumenza aqonde ukuba nguLowo.
Yenza azive ekhethekileyo
Akukho mntu uthanda imvakalelo zivavanywayo ngokungathi ukuba azalise inkcazo yomsebenzi. Thabatha ixesha ukumazi umntu wakho kunokuba ukumenza kudlulela luhlu lokuhlola ukuqinisekisa ukuba yena nguye ekunene. xa uthandana nomntu, abafazi abaninzi namhlanje siziqhelisa kutyhila into abayifunayo umntu ngaphambi kokuba uyazi ukuba ungubani ngokwenene. Ngaba kungenxa kukokobomi bethu bamelane? Ingayiyo, kodwa kufuneka ukuvumela uxinzelelo loluntu lokufumana indoda kuma endleleni ukonwaba kwakho. Yenza mfo wakho azive ngoko endaweni edlulisela isigidimi yena ziyagcwala isithuba. Le yenye inkulu; ukuba ukoyika abantu inkulu xa kuziwa ubudlelwane kunye nokuzinikela. Xa umntu ufumana ukwazi ukuba ekhangela indoda, uya balekelani. intsebenziswano yakho kwangoko ubudlelwane kufuneka konke malunga ukumazi umntu. Yenza kuye azive balinqabisa.
Musa ukumvumela ukuba bazive benyanzelekile kakhulu
Kukho amathuba high guy wakho uya kuziva unyanzelekile ukuba zisuka Ungatshintshelo bonke ubomi bakho macala kuye. Izinto zenzeka ngcembe, naxa sithetha yothando emehlweni kuqala. Ngaphezu koko, nokuzibophelela ukuze zivela ngaphakathi akanakunyanzeliswa phezu nabani. Ngaphandle ngoyaba kuye, phila ubomi bakho! Yenza ixesha kumkhawulela, kodwa musa ukulibala ukuba unosapho kunye nabahlobo kunye. Kwelinye icala, musa sibasongela ukushiya yonke imizuzu emihlanu. Vuyani kwaye zithembeke! Kumenza azive lucky ukuba wena elide wamlinda imvakalelo ukuzibophelela iza kuphuhlisa ngokukhawuleza.
Yenza okomzuzwana elihle naye
A lwalamano luhleli ayikwazi ingakhiwa ngaphandle isiseko esiluqilima uthando omnye komnye yaye olikhumbula ongazicebanga naye. Qinisekisa ukuba ufumane ixesha ukuba usebenzise ubuchule yakho iniqubule kuye ukwakha uhlobo lasekunene iinkumbulo. Kuphephe ukuba umnqweno ukuthetha ngekamva solwalamano lwakho, kungakhathaliseki ukuba kangakanani ukuba singabeki lo mbandela. Kuba mnandi nangokudlalayo! Yiba kumntu uyathanda ukuba kunye! kwimizuzu HIV isitshixo intliziyo yomntu.